Ukupakisha kwepulasitiki, Isitsha se-Aluminium, Yenza Ishubhu Ephezulu - I-HEYPACK
Siyibhizinisi elizimele eligxile ekukhiqizeni nasekuthengiseni zonke izinhlobo zephakeji neziqukathi. Kule minyaka eyi-15 edlule, sinikeze insizakalo yephakheji yamabhizinisi amaningi. Sizinikezele ekwenzeni ngcono izinga lokuklama kwebhizinisi lethu.
Siphupha ukuba ngumhlinzeki wesikhwama sephakethe lomhlaba jikelele, futhi sinikeze insizakalo yemikhiqizo eyi-10000 emhlabeni wonke. Sine design umkhiqizo oqinile futhi ezimele, ukuthuthukiswa komkhiqizo amaqembu.
Ukupakisha & Isitsha
Ibhodlela, Tube, Jar
Ibhodlela le-Hdpe / PP
Bath & Izinwele
I-Aluminium / Ishubhu yePulasitiki
Ibhodlela leRoll On / Deodorant
Ibhodlela lePump / Sprayer
Kubandakanya ukulungiselela okusha. Amabhodlela anemibala enza ukwenziwa, Ukushaywa kwebhodlela nokujova. Ukulahlwa komphezulu njenge-electroplating, .Scincare. Ukuphrinta okufana nokulebula, ukuphrinta kwe-Ofiset, ukuphrinta kwesikrini, ukugaya igolide / isiliva / uRose njll.
QALA UKUPHAKHA NGO-2003
Hlola Ifektri Yethu
Ukulahlwa Kwendawo Engaphezulu Nokuphrinta
Ukuphrinta kwesikrini kwemibala engu-1-4, i-suit yolwazi lomkhiqizo, ilogi elula
Isiliva, iGolide, iRose Gold, isudi yokushaya eshisayo ye-Purple yelogo
Isudi yelebula emhlophe, esobala, enemibala yezitshalo, umuntu.
Matte omnyama, matte omhlophe, noma omunye umbala wekhwalithi ephezulu yeprod
Ibhodlela elinelebuli lokuphrinta
Ibhodlela lombala elihlukile
Ibhodlela le-semi-transparent spray
ibhodlela leplastiki le-Valve
Ibhodlela le-serume yobuso